PaySketch: PayPal Analytics uye Kuzivisa | Martech Zone
PaySketch: PayPal Analytics uye Kuzivisa
Chipiri, Gunyana 2, 2014 Chipiri, Gunyana 2, 2014 Douglas Karr
Isu tine vamwe vatinoshanda navo muindastiri iyo inoshandisa PayPal kune ese maitiro avo. Kubhadhara masuo uye mapurosesa anowedzera zvakati wandei zvemari pazvinhu zvekutengesa, saka PayPal inzira yakapusa, yakavimbika kutora mari pane kunyoreswa, kurodha pasi, uye zvimwe zvikwereti. Izvo zvakati, iyo PayPal interface haisi iyo iri nyore kufamba - saka kuwana bhizinesi njere chishandiso chinogona kukubatsira iwe kuongorora, kuongorora, kuunganidza uye kusangana nevatengi vako zvinogona kukupa mukana wakakura iwe.
Paysketch inopa inokwanisika bhizimusi njere desktop application iyo inokubatsira iwe kubata uye kuongorora rako bhizinesi pane iyo PayPal's interface iyo inongopa chete inonzwisisa mukutenga. PaySketch inopa yakazara maonero eakaunzi yako pamwe nemadhibhodhi akasarudzika ekutengesa, kutengesa, kubhadhara, vatengi, zvigadzirwa uye nekuzivisa.
Pane zvinhu zvitatu zvakakosha kuPaySketch:
Analytics - PaySketch inopa chaiyo-nguva PayPal Analytics ine ruzivo, fungidziro uye kuongorora maitiro kuti ikubatsire kuongorora nekuvandudza bhizinesi rako.
Reporting - Sefa, tsvaga, tarisa uye utore nekutengesa kwePayPal ipapo ipapo. Wona uye wedzeredza mishumo yekutengesa, zvigadzirwa uye / kana vatengi.
Account Management - Tevedzera kutengeserana, tarisa account yako chiyero, maitiro ekudzosera mari uye kutumira mari.
Tags: vatengi vepa paypalpaypal dhibhodhikubhadhara kwakabhadharwaPaypal zvigadzirwakubhadhara paypalpaypal mishumopaypal kutengesapaypal shandukopayskettch
Iyo Inoshamisa Sayenzi Ishure Kwesimba uye Kufuridzira
Sep 7, 2014 na3:13 PM
Ndatenda nezano Douglas. Paysketch inoita seinobatsira uye inonakidza. Ndichazviedza.